नेकपाः वामदेवबाट फेरि धोकाको संकेत, पुग्ला त भ्यागुताको धार्नी ? - || वर्णन मिडिया - संवाहक सूचना तथा समाचारको ||
नेकपाः वामदेवबाट फेरि धोकाको संकेत, पुग्ला त भ्यागुताको धार्नी ?
२०७७ श्रावण १३, मंगलवार १४:३४:००
सत्तारुढ नेकपामा आएको ज्वरोको कम्पनले देशै हल्लिसक्यो । तर स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छोएको छैन । फुट्नै लाग्यो भनिएको पार्टीमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बहुमत रहेको पनि बताइँदै छ । तर भ्यागुताको धार्नी नपुग्ने भयले कसैले पनि अप्रिय निर्णय लिने आँट गरेको देखिँदैन ।
नेकपाका सबै नेताहरुले राम्ररी बुझेका छन्, इतिहास जित्नेहरुकै लेखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएका दुईवटा अध्यादेशको उद्देश्य सफल हुँदो हो त आज उनको पनि ताली बजाएरै पत्रिकाका पाना भरिन्थे । वाह, ओली त के चतुर ? अर्काको पार्टी फुटाएर आफ्नो सत्ता टिकाए । विरोधीलाई ठेगान लगाए । मान्नैपर्छ ।
तर ओलीको त्यो हतियार प्रत्युत्पादक भयो । अहिलेसम्म त्यही नाममा गाली खाइरहेका छन् । ओलीले अरु पनि यस्तै अलोकप्रिय हतियार अझै उठाउने जोखिम छ । विरोधी खेमाले ओली अझै अलोकप्रिय भइदिऊन् भन्ने चाहेको छ ।
ताकि, आफ्ना अप्रिय कदम ओलीको अलोकप्रियता र अकर्मण्यता छोपियोस् । तर पर्खिँदा पर्खिँदै समय यसरी घर्किँदै छ कि, जनता महामारी र भोकमरीले मरिरहँदा नेताहरुलाई केवल आफ्नै कुर्सीको चिन्ता छ भनेर आक्रोश बढ्दै छ ।
ओलीलाई पदच्युत गरिछाड्नेमा माधव नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ एकमत छन् । तर प्रचण्ड अझै खुट्टा कमाइरहेका छन् । किनभने, उनी पूर्वएमाले कित्ताबाट बहिष्कृत बन्नुपर्ने भयमा बाँचिरहेका छन् ।
पूर्वएमाले कित्ताबाट बहिष्कृत भएमा आगामी महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा नस्वीकार्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता उनको छ । त्यसैले उनी बेलाबेला ओलीलाई फकाउन पुग्छन् ।
अर्कोतिर प्रचण्डलाई उचाल्नेमध्ये वामदेव गौतम कुन बेला कित्ता परिवर्तन गर्छन् भन्ने टुंगो छैन । जारी स्थायी समिति बैठककै बीच पनि उनी दुईपटक झुक्किइसकेका छन् । वामदेवले आफूभन्दा पहिला गएर ओलीसँग कुम जोडिहाल्छन् कि भनेर प्रचण्ड आफै कुम जोड्न पुगेका छन् । यसले विरोधी मोर्चामै अविश्वास बढाएको छ र आत्मबल कमजोर बनाएको छ ।
ओलीविरुद्धको आक्रमणमा प्रचण्डको आत्मविश्वास कमजोर भएको भनेको उनका सहकर्मी एवं विश्वासपात्रहरुले नै साथ छाड्नु पनि हो । जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, मणि थापा, देवेन्द्र पौडेल, टोपबहादुर रायमाझी, हरिबोल गजुरेल लगायत नेताहरु पार्टी फुट्न नहुने र विवाद जति महाधिवेशनबाट टुंगो लगाउनुपर्ने अडानमा बसेका छन् । यसले सचिवालयदेखि स्थायी समितिसम्मै प्रचण्ड मोर्चालाई कमजोर बनाएको छ ।
अझ केही दिनयता त वामदेव र बादल विरोधी मोर्चाका भेलामा जानै छाडेका छन् । वामदेवले त प्रचण्डका गतिविधिका कारण पार्टी फुट्न लागेको भन्दै फुटबाट जोगाउने नयाँ औषधीका रुपमा जबजको संशोधित दस्तावेज तयार गरेका छन् ।
त्यो दस्तावेज उनले झलनाथ खनाललाई पनि दिएका छन् । हेटौँडा महाधिवेशनको समीकरण ब्यूँताउनुपर्ने भन्दै वामदेवले खनाललाई पनि सहमत गराउने प्रयास गरेका छन् ।
झलनाथ खनाल पनि ओली पक्षले आगामी महाधिवेशनको आयोजक समिति संयोजक बनाउने प्रस्ताव गरेपछि त्यतैतिर लोभिएका छन् । माधव नेपाल र प्रचण्डको पछि लागेर मात्र कुनै फाइदा नरहेका निष्कर्षमा पुगेपछि उनी मझधारमा उभिने सम्भावना बढेको छ ।
यस हिसाबले विरोधी मोर्चा आफै भ्यागुताको धार्नी पुर्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसर्थ, यस खेमाका लागि अब स्थायी समितिको बैठक बस्नुभन्दा सार्नु नै भलो हुने देखिएको छ । सम्भवतः ओलीले पनि तिनको इच्छा पुर्याइदिनेछन् ।
अब प्रचण्ड र माधव नेपालसँग फेस सेभिङका लागि एउटै हतियार बाँकी छ, केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग । अझ बढी नेताहरुबाट ओलीको विरोध ।
अझ धेरै नेताहरुका बीच तमासा । चिन्ताको विषय के भने कम्युनिस्टहरुको कलाविहीन नाटकको तमासा हेरेरै दुई तिहाईको कार्यकाल पनि बित्ने भयो ।
दाहालले भने– ‘अझै अहंकार र दम्भ हटेन’
प्रदेश नं १ मा १८० सङ्क्रमित, ८४ डिस्चार्ज
पार्टीसँगको सम्बन्ध राम्रो नभए सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम ग...
पार्टीसँगको सम्बन्ध राम्रो नभए सरकारले जनअपेक्षाअन...